Software-ka si fudud uma furmayo oo fiidiyow ayuu bilaabayaa. Waxay soo baxdaa sheeko qurxoon oo kuugu deeqaysa inaad kula sheekaysato qofka dhinaca kale. Soo-saarista waxaa bilaabi kara wakiilka, si toos ah ayaa loo bilaabi karaa, ama isticmaalaha ayaa dhajin karaa tab fiican oo dhinaca shaashadda ah si uu u bilaabo.
In kasta oo qaar badan oo ka mid ah natiijooyinka degdegga ah lagu arko tafaariiqda, haddana ma qiyaasi karo waxa maalgashiga barnaamijyada sidan oo kale ah ay u sameyn karto sii-haynta macaamiisha ee Software-ka shirkadaha Adeegga ah. Awoodda aad dhab ahaan isku arki karto oo aad shaashad ku wadaagi karto ayaa adeegga macaamiisha ka dhigaysa mid fudud oo aan ka ahayn riyada hadda jirta! Waxay umuuqataa in Vee24 kaliya aysan aheyn hogaamiyaha warshadan, ay yihiin shirkada kaliya ee hada bixisa adeegan. Shaki kuma jiro inay si weyn u guuleysan doonaan! Waxaan horeyba ugu garaaceynaa kaqeyb qaadasho tixraac ah.